Midowga Yurub oo war ka soo saaray arrimaha Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Midowga Yurub oo war ka soo saaray arrimaha Soomaaliya
Midowga Yurub oo war ka soo saaray arrimaha Soomaaliya
Midowga Yurub ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka, Amniga iyo abaaraha xilligaan kajira meelo badan oo ka mid ah wadankaasi.
Sidoo kale dalalka Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay heshiiska laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay Madaxda Sare ee dowladda Soomaaliya.
Waxaa ay ugu baaqeen Madaxda Soomaalida in la dhameystiro doorashooyinka ka hor dhammaadka sanadkan 2021-ka si aysan dalka uga dhicin xasilooni darro siyaadadeed.
Ugu dambeyn dalalka Midowga Yurub ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin weeraradii ugu dambeeyay ee Ururka Al-Shabaab ka fuliyeen Soomaaliya, iyagoo sidoo kale muujiyay walaac la xiriira weerarro kale oo ay Al-Shabaab ka fuliyaan Soomaaliya.
Dalalka Midowga Yurub ayaa waxay Soomaaliya siiyaan taageero amni iyo mid dhaqaale.
Next articleBangiga AfDB oo dhaqaale ku taageeraya barnaamijyada dowladda ee ka dhanka ah isbeddelka cimillada